नेपालगञ्जबाट ओलीको चुनौतीः भोट गन्दा थाहा पाउला, मधेसबाट को बढारिन्छ हार्नलाग्दा भोट च्यात्न चाहिँ नखोज्नू
By radiovision on	 June 11, 2017 प्रमुख समाचार, राष्ट्रिय, विचार-अन्तरवार्ता
एमालेले जित्छ । अरुले एमाले विरुद्ध षडयन्त्र किन गर्छन् भने एमाले बलियो छ । यो नेपालगंजमा त चुनावमा मात्रै होइन समसुद्धिन सिद्धिकीसँग अखडामा लड्नु पर्यो भने पनि अरुले विचार गर्नु पर्छ । कसैले आँटै गर्दैन । किनभने बलियो छ । एमाले बलियो भएपछि अरुले लड्न विचार गर्नु पर्छ, योजना बनाउनु पर्छ अनि दलबल गर्नु पर्छ । अरु अरु त्यसरी दलबल गरेर आउन सक्छन् एमालेका विरुद्ध । साँठगाँठ गर्न सक्छन्, षडयन्त्र गर्न सक्छन्, अनेक प्रकारका योजना बनाउन सक्छन् । अरुले जतिसुकै साँठगाँठ गरे पनि एमाले पहिलो छ भन्ने कुरा अघिल्लो चरणको चुनावले देखाइसकेको छ । कतिपय ठाउँमा बुथकब्जा अनेक चिज भए । कतिसम्म भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईंहरुले भरतपुरमा देख्नु भो । भोट गनिसक्न लाग्दा ७८४ ले एमाले अगाडि लाग्दा दाुईचारवटा मत च्यातेर तमासा गरेका छन् । अहिले मतगणना रोकिएको रोकियै छ । चुनाव भएपछि मत गन्नु पर्दैन ? गनेर परिणाम घोषणा गर्नु पर्दैन ? हार्नेको प्रतिनिधिले च्यातेर जित्नेलाई जीतको घोषणा हुनबाट रोक्ने, फेरि चुनाव गर्ने भनेर अनेक तमासा भइरहेका छन् । मुद्दा अदालतमा छ हामी धेरै भन्न चाहंदैनौं । एमाले जित्नलाग्यो भनेपछि मत च्यातेर गलत मनसायले मत च्याते । जति कब्जा गरे पनि, जति मत च्याते पनि नेकपा एमालेले अत्यधिक ठाउँमा जितेको छ ।
एउटा हल्ला छ– मधेसमा एमाले टिक्न सक्दैन, एमालेलाई बढारिन्छ भनेर । चुनाव नहुन्जेल बढारिन्छ । चुनाव भएर गन्ने बेला थाहा पाउला एमाले बढारिन्छ कि मधेसमा को बढारिन्छ । मधेसका जनताले के सधैं लडाईं झगडा चाहन्छन् ? विकास निर्माण चाहंदैनन् ? के सामाजिक सदभाव चाहंदैनन् ? अवश्य पनि मधेसमा बस्ने नेपाली जनता झैझगडा चाहंदैनन्, विकास र सामाजिक सदभाव चाहन्छन् । मधेसका जनता अपराध चाहन्छन् ? हिंसा चाहन्छन् ? होइन शान्ति चाहन्छन्, मेलमिलाप चाहन्छन् । बैरभाव चाहंदैनन् विकास चाहन्छन् । पछौटेपन चाहंदैनन् । पछौटेपन हटाउन विकास गर्न शान्ति चाहिन्छ, शान्ति । शान्ति एमालेले जितेर मात्रै आउन सक्छ, एमालेको नीतिबाट मात्रै आउन सक्छ । त्यसकारण जनता एमालेकै पक्षमा हुन्छन् ।
म नेकपा एमालेका साथीहरुलाई भन्छ चाहन्छु । साथीहरुलाई लागेको होला–आफू उम्मेदवारमा पर्न पाएको भए हुन्थ्यो । आफूले भनेको मान्छे पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पर्न सक्छ । तर, एउटा पदमा एकजनालाई उम्मेदवार बनाउने हो । उम्मेदवार बन्नका लागि यो उपमहानगर पालिकामा एमालेका सैकडौं योग्य छन् । मेयर बनाउन योग्य सयौं छन् । तर, मेयर एउटालाई मात्रै बनाउन पाइन्छ । एउटालाई बनाउँदा सयौं छुट्छन् । छुटेकाले असन्तुष्ट हुन पाईंदैन । म आग्रह गर्न चाहन्छु– यतिबेला एमालेका विरुद्ध विभिन्न शक्ति घेराबन्दी गरेर लागेका छन् । किनभने एमालेलाई कमजोर नपारी यस देशलाई कमजोर बनाउन सकिंदैन, यसलाई दुखी गरिव बनाउन सकिंदैन । एमालेलाई कमजोर नबनाई यस देशलाई कुल्ली कवाडको देश बनाउन सकिंदैन, रोजगारी खोज्न विदेशमा भौंतारिनेको देश बनाउन सकिंदैन । त्यसकारण एमालेलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र भइरहेको छ, किनभने यसले देशका हितहरुको रक्षा गर्छ । देशको स्वतन्त्रता, स्वाभीमान, एकता र विकासको रक्षा गर्छ ।
यहाँहरुलाई थाहा छ– दैलेखमा पेट्रोल खानी, तेल खानी छंदै थियो । तर, एमालेको सरकार आउनु पर्यो दैलेखको तेल खानी पत्ता लगाउन । एमालेको सरकार देशी विदेशी मिलेर किन हटाइहाल्नु पर्यो भने हामीले त्यहाँबाट पेट्रोल निकालेर बेच्यौं भने नेपाल अरवका देश भन्दा अघि बढ्छ , किनभने यसको जनसंख्या एकदमै कम छ । नेपाल धनी भइहाल्छ । नवलपरासीमा एउटा १२ किलो मिटर पहाड नै फलाम खानी छ । अढाइसय मिटर तलसम्म फलाम छ । त्यहाँ फलाम निकाल्न सकियो भने यहाँ एउटा स्टिल भन्नुस् वा एउटा छड बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन, हामी यहीँबाट आत्मनिर्भर हुन्छौं । हाम्रा बाटा, हाम्रा पुल, हाम्रा घर सबै यही फलामले बन्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ । अनि त्यसैले हाम्रो विकास नहोस् भन्नेहरु आत्तिन्छन् ।
हामीले कृषिको आधुनिकीकरणको अभियान लग्यौं, त्यसकारण आत्तिए । नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न हामीले सुपरजोन र जोनहरु बनायौं । त्यसकारण यिनीहरु आत्तिए । हामीले हरेक प्रदेशमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, हरेक प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने । यी कामहरुलाई हामीले अगाडि बढायौं । बाटोहरु, रेल्वे आदिका कनेक्सनहरु, एउटा देशको निर्भरता होइन । अव नेपाल स्वतन्त्र भएर आकाशमा चराहरुले कावा खाए झैं कावा खाँदै आफ्नो उन्नती गर्न सक्छ भन्ने अवस्थामा नेपाललाई पुर्यायौं । त्यसकारण एमालेलाई हतार हतार हटाउनु पर्यो । हाम्रो पार्टीका सही नीति र सही योजनाहरुलाई जनताका बीचमा लैजानु पर्छ ।
म भन्न चाहन्छु साथीहरुलाईः स्थानीय तहको संख्या र सीमा अव परिवर्तन हुँदैन, यही जे छ त्यसैमा चुनाव हुन्छ । असार १४ गतेको मिति सर्छ कि भन्ने शंका गर्नु पर्दैन, सर्नेवाला छैन । त्यो नसोचे हुन्छ । असार १४ गते नै चुनाव हुन्छ । उम्मेदवार साथीहरु ढुक्क भएर लाग्नुस्, उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन । नेपालगंज उपमहानगर पालिकाका एमालेका उम्मेदवारहरु शानदार ढंगले जितेको देशभरका एमाले कार्यकर्ताहरु सुन्न चाहन्छन् । अव ४ वटा प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ । प्रदेश नम्बर १ एमाले अत्यधिक बहुमतका साथ चुनाव जितेको खवर तपाईंहरुलाई सुनाउन आतुर छ । प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ७ त्यसैगरी शुभसमाचार सुनाउन आतुर छ । तपाईंहरु अव दुई हप्ता खटेर अरु प्रदेशलाई सन्देश दिनुस् । धनुबाट छुटेको काँड जस्तै खट्नुस् ।
(नेपालगंजमा आइतबार भएको कार्यकर्ता भेलामा ओलीले ब्यक्त गरेका विचारको अंश)